Pressure sensor Factory |China Pressure sensor Manufacturers, Suppliers
KHP610 Differential pressure Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
Zvishandiso: zvakanyanya kushandiswa peturu, simbi, indasitiri yemakemikari, simba remagetsi, indasitiri yemwenje, michina uye kuchengetedza zvakatipoteredza, mvura & tsvina yemvura, zvekuvakisa, simba, indasitiri yechikafu, kugadzirwa kwesimbi, mafuta uye gasi kumahombekombe, indasitiri yemapepa, kuvaka ngarava uye zvimwe minda. .
KHP300 Universal kudzvanywa Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
KHP300 Air conditioning pressure Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo kubuda.
KHP300T Yakakwira Tembiricha yekumanikidza Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisiswa, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
KHP302 Kuputika-uchapupu Kudzvinyirira Sensor Transmitter
KHP302 Kuputika-uchapupu kumanikidza Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
KHP305K Sanitary pressure Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
Zvishandiso: zvakanyanya kushandiswa mukudya, mukaka, mechaniki uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza mamwe minda.
KHP2000 Universal kumanikidza Sensor transmitter: inotora kunze kwenyika yakakwira diffusion silicon sezvinhu zvinonzwisa tsitsi, yakakwirira-chaiyo uye kugadzikana kwepamusoro, dunhu rakavakwa-mukuchinjana mV siginecha kune yakajairwa ikozvino, voltage chiratidzo chinobuda.
KH3351 yakatevedzana yedhijitari yekusiyanisa kumanikidza Sensor transmitter, yakawanda-inoshanda smart pressure transmitter, yakagadzirirwa maindasitiri ekuyeresa kuyera zvikumbiro, zvichibva pamakore edu ehupfumi hwekugadzira maindasitiri ruzivo, kutora yemazuva ano yepamusoro, yakakura, yakavimbika capacitive sensor tekinoroji, zvakare yakasanganiswa neyepamberi imwe- chip komputa tekinoroji uye sensor digital kutendeuka tekinoroji.
CPU inotora gumi nenhanhatu machipisi, ane masimba ane masimba uye yakakwirira-kumhanya komputa simba inovimbisa iyo inotapurirana nemhando yakanaka uye kuita.Iyo software ine dhijitari yekugadziridza tekinoroji yekugadzira transmitter ine yakanakisa anti-kupindira kugona uye zero kugadzikana, ine zero otomatiki yakagadzikana yekutevera kugona (ZSC) uye otomatiki tembiricha muripo wekugona (TSC).
Ane simba interface maficha asina ruoko rwakabatwa mutauriri anokwanisa kuve nechokwadi chekudyidzana kwakanaka.LCD chiratidzo chinogona kuratidza kudzvanywa kwedhijitari, tembiricha, yazvino marudzi matatu emuviri uye 0-100% analog chiratidzo.Kana isiri-yakajairwa kudzvanywa sosi, parameter inogadzika zero shift, renji yekumisikidza damping gadziriso inogona kuve nekudzvanya kiyi bhatani;uye zvakare kugadziridzazve pane transmitter yakanakira pane-saiti calibration.
Serial interface kutaurirana inogona kushandurwa kuita 4-20mA DC yazvino siginecha inobuda kuburikidza neyakatsanangurwa inoshandura module, inowanikwawo kuburikidza neHart protocol (RS485 module) kuseta uye kutarisa kure kutapurirana, yakanangana neatenzi mudziyo, senge isina mapepa rekodha, controller, chiratidzo. etc chiridzwa, HMI, IPC, PC, Industrial Lan.
KH3351 inoshandiswa kuyera musiyano Sensor pressure, gauge pressure, absolute pressure, fluid level, flow etc parameters yegasi, mvura, mhute, inoshandiswa zvakanyanya mupetroleum, metallurgy, makemikari, simba, light industry, mechanic and environment protection fields.